mmhan - Personal website of Mike Myat Min Han
Self-study လုပ်ရင် သတိထားရမယ့် ၁၀ ချက် Permalink
28 March 2022 11:10 PM
ကျွန်တော် mentor လုပ်နေတဲ့ Ruby on Rails self-study group ထဲက ညီကိုမောင်နှမများကို သတိပြုမိစေဖို့ ဒီစာလေးကို ရေးလိုက်ရပါတယ်။ Remember to take breaks ဘာစာမှမလုပ်ခင်မှာ အနားယူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ စာလုပ်ပြီဆိုပြီးထိုင်လိုက်ပြီဆိုရင် နှစ်နာရီ သုံးနာရီတကြိုက်ထဲလုပ်တာမျိုးထက် ၂၅ မိနစ်...
လိုအပ်တာ vs. လိုချင်တာ Permalink
14 March 2022 10:00 PM
Everything is F*cked - A book about hope မကျဉ်းတကျဉ်းချုပ် အပိုင်း၄ အပိုင်း၁၊ အပိုင်း၂ နဲ့ အပိုင်း ၃ မဖတ်ရသေးရင် ဖတ်လိုက်ဦးနော်။ Chapter 8 အမျိုးသမီးတွေ ဆေးလိပ်မသောက်သေးတဲ့ ခေတ်တစ်ခုရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကောလိပ်တတ်တာသည် အမျိုးသမီးအလုပ် မဟုတ်၊ အိမ်ပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်တာသည် အမျိုးသမီးအလုပ်...
ပျော်ရွှင်မှု အမှတ် ခုနစ် Permalink
6 March 2022 12:10 AM
Everything is F*cked - A book about hope မကျဉ်းတကျဉ်းချုပ် အပိုင်း၃ အပိုင်း၁ နဲ့ အပိုင်း၂ မဖတ်ရသေးရင် ဖတ်လိုက်ဦးနော်။ Chapter7သုသေသနတွေအများကြီးရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ လူတွေကို အပြာရောင် အစက််လေးတွေနဲ့ ခရမ်းရောင်အစက်လေးတွေကိုရောပြီး အစက်ပေါင်းတစ်ထောင်ကိုပြတယ်တဲ့။ အစပိုင်းမှာ အပြာရောင်...
ခြစားနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခု Permalink
26 February 2022 01:20 AM
Everything is F*cked - A book about hope မကျဉ်းတကျဉ်းချုပ် အပိုင်း၂ အပိုင်း၁ မဖတ်ရသေးရင် ဖတ်လိုက်ဦးနော်။ Chapter6ကလေးတစ်ယောက်ဟာ မီးဖိုပေါ်က ဒယ်အိုးကို လက်နဲ့ မတော်တဆကိုင်ဘူးတယ်ဆိုပါစို့။ အပူလောင်သွားတဲ့ ဒါဏ်ရာကို ကြည့်ပြီး ရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာက ပူနေတဲ့အရာတွေကို မကိုင်သင့်ဘူးပေါ...
အရာအားလုံးဟာ လခွီးဖြစ်နေသောအခါ Permalink
21 February 2022 12:05 AM
Everything is f*ucked -abook about hope မကျဉ်းတကျဉ်းချုပ် Chapter 1 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက Auschwitz လို့ ကြားလိုက်ရရင် လူ့ဘုံက ငရဲခန်းတစ်ခုလို့ မမြင်တဲ့ လူခက်ရှားရှားရယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ Auschwitz ကိုဝင်ပြီး အဖမ်းခံနေရသူတွေကို ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူ၊​ လူသားမဆန် ...
Use SSL to develop Rails projects using Puma-dev Permalink
8 September 2021 11:40 PM
I recently learned that there isatool called puma-dev that allows you to develop locally with SSL enabled. Here is how to set it up.
Visit Link 🔗